Vidio ndị dị na peeji ọdịda na-abawanye ngbanwe site na 130%
Ibe vidiyo na-abawanye Mgbanwe 130%
Enweela ụfọdụ ọnụọgụ siri ike na vidiyo ahụ enwekwu akakabarede udu na ozi ịntanetị site na 200% gaa 300%. Vidiyo na-amalite ịrụ oke ọrụ gafee ọwa ahịa niile. Imavex bụ web mmepe ike aha otu n'ime ụlọ ọrụ ịzụ ahịa njin kacha elu na mba.
Anọ m na-agwa Ryan Mull na ọ kpọtụrụ aha na ha achọpụtala ọkwa dị mma na ọnụego nkwụghachi ụgwọ nke ndị ahịa ha mgbe ha tinyere vidiyo dị elu na peeji ọdịda.
Ozi ọma ahụ bụ, data ahụ doro anya, na dataset buru ibu iji gosi ezigbo nsonaazụ. Site na ịgbakwunye vidiyo na peeji nke ọdịda SEM / PPC, onye ahịa ahụ hụrụ ịrị elu 130.5% na ndu sitere na mkpọsa ahụ. kwa Ryan Mull, Imavex dere
Imavex weputara ikpo okwu nnabata vidiyo, Onye na -egwu mmiri, na ha na-etinye n'ọrụ iji lelee ma jee ozi vidiyo ndị a dị elu.
Gwọ maka vidiyo vidio ejiri jikọtara nke ọma nwere ike ịdị iche na ọnụahịa. E nwere nnọọ ole na ole obodo video ego nwere ike ime videos n'okpuru $ 1,000 ọ bụla. More ọkachamara videos nwere ike na-eri $ 2,500 na elu - ma ọ bụrụ na ị na-amụba tọghatara site 130%, ọ dịghị ewe ihe dị ukwuu iji ghọta nti nloghachi na ego!
Tags: mgbanwe ntụgharịmụbaa mgbanweọdịda pagembido peeji nkeVidio Ahịavideo akakabarede udu
Na-ebute Ọgụ Mgbe Niile
Jun 14, 2010 na 9:01 AM
Ọ dị mwute, mana ọ bụ eziokwu site na ihe m hụworo.
Ọbụna nha, akụkụ ya, na itinye ya na saịtị ahụ na-eme ka m nwee nsogbu, ya mere a gwara m
Nwere ike ịkekọrịta ụfọdụ 'akụrụngwa vidiyo mpaghara' ị kwuru? Ana m achọ ime vidiyo ndị ọzọ na-enweghị ike ịchọta ndị na-ere ahịa ziri ezi.
Chaị! Onye mepụtara vidio a? Ọ ga-amasị m izute ha. Mmadu enwere ike iwebata m?
Jun 15, 2010 na 10:49 AM
N'ebe a na Indianapolis, ihe onyonyo vidiyo bụ Imavex (http://www.imavex.com), Kantalup (http://www.cantaloupe.tv), Ọzọ Cool Design
Kpakpando Media (http://12starsmedia.com) na mpaghara - ha niile na-arụ nnukwu ọrụ ma na-adịgasị iche na ọnụahịa na ngwaahịa.
Ọkt 20, 2014 na 2:50 PM
Ana m arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ vidiyo na-akọwa nkọwa nke Toronto a na-akpọ LaunchSpark Video, anyị achọpụtala na ọ bụghị naanị vidiyo enyerela aka ịbawanye ahịa maka ndị ahịa anyị, mana ọ rụkwaala ọrụ dị ka ezigbo ngwaọrụ maka atụmatụ ọgbọ ha n'ozuzu ha. Ọtụtụ ndị ahịa anyị ejirila vidiyo ha kọwaa ha na ngosipụta na ngosipụta yana, yana site na ịnye ndị na-ege ntị nkọwapụta ngwa ngwa banyere ngwaahịa / ọrụ ha, ọ gbanwere ndị na-ekiri ha na-eduga. Ikike iji mejuputa vidiyo na otutu ọwa bụ ihe ọzọ na - eme ka ọ bụrụ nnukwu ngwa ahịa!
Ọkt 21, 2014 na 2:04 AM
Nnukwu vidiyo, Fabio!